Nepalistudio » के ‘टाइटानिक’ मा हिरो ज्याक बच्न सक्थे ? के ‘टाइटानिक’ मा हिरो ज्याक बच्न सक्थे ? – Nepalistudio
के ‘टाइटानिक’ मा हिरो ज्याक बच्न सक्थे ?
‘टाइटानिक’, दुर्घटनाका साथै एक प्रेमकथालाई दर्शाउने चलचित्र हो । तर चलचित्रको अन्त्य अत्यन्त दुखद रहेको छ । प्रेमिकाको ज्यान बचाउन प्रेमीले आफ्नो ज्यान गुमाउँछ ।
यो चलचित्र आरएमएस टाइटानिक नामको पानीजहाजको कहानी हो । जुन इंग्ल्याण्डको साउथ ह्याम्प्टनदेखि अमेरिकाको न्यूयोर्कतर्फको आफ्नो पहिलो यात्रामा थियो । तर आफ्नो पहिलो यात्राको क्रममै १४ अप्रिल १९१२ मा एउटा टापुमा ठोक्किएर एटलान्टिक महासागरमा डुबेको थियो । दुर्घटनामा १५०० सयभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । टाइटानिक दुर्घटना कसरी भयो भन्ने बारे विभिन्न दृष्टिकोण पटकपटक आइरहेको छ । तर सन् १९९७ मा जेम्स क्यामरुनले यसैमा आधारित भएर चलचित्र बनाए, जुन सर्वाधिक सफल हुन सक्यो ।
के भएको थियो चलचित्रमा ?
यो चलचित्र बनाउन निकै नै खर्च गरियो । वास्तविक टाइटानिक जहाज बनाउन लागेको खर्चभन्दा बढी खर्च चलचित्र बनाउन खर्चिएको बताइन्छ । तर चलचित्रलाई लिएर धेरेले आलोचना गरेका थिए । चलचित्रमा जब जहाज डुब्न थाल्छ तब नायक ज्याक आफ्नो ज्यान गुमाउँदै नायिका रोजलाई बचाउँदछ । जहाज डुबेपछि ज्याक र रोजले एउटा काठको फ्ल्याक भेट्टाउँछन् । उनीहरु दुबै त्यसैमा सवार भएर आफ्नो ज्यान बचाउने प्रयास गर्दछन् । जब दुबै जना चढेपछि फ्ल्याक पनि डुब्न थाल्छ । धेरै वर्ष दर्शकको दिमागमा एउटा प्रश्न उब्जिरह्यो । के रोजलाई बचाउन सकेको ज्याकले आफ्नो ज्यान बचाउन सक्थेन ? के त्यो काठको फ्ल्याकले दुबैलाई धान्न सक्थेन ? फिल्म निर्माता जेम्स क्यामरुनलाई यही प्रश्न पटकपटक सोधियो ।
भ्यानिटी फेयरसँगको अन्तर्वातामा क्यमरुनले मुख खोलेका छन । उनलाई रोजले ज्याकका लागि किन ठाउँ नबनाएको भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । क्यामरुनेले भने, ‘यसको सिधा उत्तर छ चलचित्रको स्क्रिप्टको १४७ पृष्ठमा लेखिएको थियो कि ज्याकको मृत्यु हुनेछ । यो कलाको दृष्टिकोणबाट निर्णय लिइएको हो ।’ क्यामरुन भन्छन्, ‘त्यो काठको फ्ल्याक ‘ढोका’ रोजलाई मात्रै हुने गरी बनाइएको थियो । यो कुरा निकै मार्मिक हो । चलचित्र बनेको २० वर्षपछि पनि यही प्रश्न सोधिइएको छ ।
चलचित्र यति राम्रो बनेको रहेछ कि दर्शकलाई ज्याकको मृत्युले गहिरो दुःख दिएछ ।’ जेम्स क्यामरुन भन्छन्, ‘यदि उ नमरेको भए चलचित्रको अन्त्य अर्थहिन हुन जान्छ । यो चलचित्र मृत्यु र वियोगका कुरामै आधारित थिए । जे हुनु थियो त्यो भएरै छाड्छ । उसलाई मर्नु नै थियो । केही चिज कलाको दृष्टिकोणबाट लेखिन्छ । भौतिक कारणले होइन ।’ त्यस्तै जेम्स क्यामरुन कला कलाकै कारण सुन्दर हुने बताउँछन् । उनी भौतिकताले कलालाई सुन्दर बनाउन नसक्ने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘मैले दुई तीन दिनसम्म त्यो काठको ढोकामा मानिस बस्न मिलोस् भनेर प्रयास गरिरहेको थिएँ ताकि रोज चिसो पानीमा त्यसमा उभिन सकुन् र उनी नडुबुन् पनि ।’ उनले भने ‘ज्याकलाई थाहा थिएन कि उसलाई बचाउन एक घण्टापछि लाइफबोट बचाउन आउँछ । उ मरिसकेको थियो । तपाईँले चलचित्रमा जे देख्नुभयो, हामीलाई थाहा थियो कि उनीहरुमध्ये एक जना मात्रैलाई बाँच्नु थियो ।’